ဆောင်းလူ – ဒီကိစ္စကို သိပ်စိတ်ပူတယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းလူ – ဒီကိစ္စကို သိပ်စိတ်ပူတယ်
ဒီကိစ္စကို သိပ်စိတ်ပူတယ် …။
ရန်သူလည်းကြောက်ရ … ရန်သူ့ ရန်သူလည်းကြောက်ရတဲ့
ဒုက္ခသည်စခန်းက ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေကလည်း ပူတယ် …။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမလေးကလည်း .. ပူတယ် …။
ပျော်တော်ဆက်မလေးကလည်း ပူတယ် …။
ကြာကြာဝါးမယ့်သွား .. အရိုးကြည့်ရှောင်တတ်ကြတဲ့သူတွေကလည်း ပူတယ်။
ဒုက္ခသည်အတုတွေပူသလို … ဒုက္ခသည်အစစ်တွေလည်း ပူတယ်။
ဗမာနိုင်ငံသား … ဗမာပြည်သားတွေက ပူတယ်။
နိုင်ငံခြားသား … ဗမာပြည်သားတွေက ပူတယ်။
ကိုယ့်ထူး ကိုယ်ချွန်တဲ့သူတွေလည်း ပူတယ်။
ထမီနား ခိုစားတဲ့သူတွေလည်း ပူတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး .. .ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့
ပါမစ်ခြင်း အလဲအထပ်လုပ်တဲ့သူတွေတောင် ..
ဒီကိစ္စမှာ ပူနေပြန်ရော ….
ဒီကိစ္စကို … ဘန်ကီမွန်းတောင် … ပူနေမယ်ဆိုမှတော့ ….
အမှိုက်ကောက်ရင်းလည်း ပူနေမယ် …။
စာဖတ်နေရင်းလည်း ပူနေတယ်ဆိုတာ ….။
ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅